आर्थिक संकटमा पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपैयाँ लगातार कमजोर ! – eSidhakura
देउवालाई फेरि ‘असक्षम’ बनाउने खेल
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियआर्थिक संकटमा पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपैयाँ लगातार कमजोर !
आर्थिक संकटमा पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपैयाँ लगातार कमजोर !
एजेन्सी । पछिल्लो समय पाकिस्तानको रुपैयाँ डलरको तुलनामा रेकर्ड स्तरमा निकै कमजोर बनेको छ । शुक्रबार (हिजो) मात्रै पाकिस्तानी रुपैयाँ ०.०६ प्रतिशत घटेर १७७.७१ प्रति डलर पुगेको छ ।
डलरको बढ्दो माग र पर्याप्त आपूर्तिको कमीका कारण पाकिस्तानी रुपैयाँ रेकर्ड तल्लोस्तरलाई पनि पार गरिसकेको छ । पछिल्लो सात महिनादेखि पाकिस्तानी रुपैयाँ लगातार कमजोर बनिरहेको छ ।मे १४ मा पछिल्लो २२ महिनाकै सबैभन्दा कम १५२.२७ रुपैयाँ प्रति डलर पुगेको थियो ।
हालसम्म यसमा १६.७ प्रतिशत अर्थात् २५.४४ रुपैयाँ गिरावट आइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकका अनुसार १ जुलाई २०२१ देखि सुरु भएको वित्तीय वर्षमा पाकिस्तानी रुपैयाँ १२.८० प्रतिशत अर्थात् २०.१७ रुपैयाँसम्म घटेको छ ।साथै २०२२ को अन्त्यसम्म
पाकिस्तानको रुपैयाँ डलरको तुलनामा १८०–१८५ रुपैयाँसम्म घट्ने टपलाइन सेक्युरिटीजले गरेको एक सर्वेक्षनले देखाएको छ ।केही समय अगाडि मात्रै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले देश चलाउन पैसा नभएको र कर्जा बढिरहेको बताएका थिए, भने गत शनिबार मात्रै साउदी अरबले पाकिस्तानलाई तीन अर्ब डलरको कर्जा दिएको थियो ।
डिभोर्सपछि एकै होटलमा भेटिए धनुष र ऐश्वर्या
लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था बारे आयो यस्तो अपडेट-
भातरका सबैभन्दा महँगा खेलाडी केएल राहुल, जो १७ करोड लिन्छन्
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीको विवाह स्थगित
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आएकी एक नेपाली विद्यार्थी मृ’त फेला
दुई छोराहरूलाई बिचल्लि पारेर विवाहको १८ वर्षपछि धनुष र ऐश्वर्या जनीकान्त अलग्गिए
२ बर्ष अघि अष्ट्रेलिया पुगेर एमपीएल पढिरहेकी २२ वर्षिय सुस्मिता मृ’त अवस्थामा फेला
पहिलो भेटमै प्रेम बस्यो र विवाह गरे, एक महिना पछि श्रीमती पो,’र्न स्टार भएको थाहा भयो
बिहे लगत्तै श्रीमानलाई सारासँग छोड्नुपर्दा कट्रिना कैफलाई भयो निक्कै भारी, अंगालो हालेर फर्किन्
श्रीमानलाई दोस्रो बिहे गर्नबाट रोक्न श्रीमतीले श्रीमानको औंला नै भाँ’चिदिइन्